“Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu” – Vusi Khoza – Isambane News
Home > Featured > “Kufanele sinakwe uma sizo zwakalisa izikhalo zethu” – Vusi Khoza
uSihlalo we-Economic Freedom Fighters (EFF) kwisifundazwe saKwa-Zulu Natal uMnu Vusi Khoza ube hlanganyele kwiMashi yokulethwa kwezidingo zomphakathi yeService Delivery namhlanje, bephelezele abahlali baseNewcastle bezo zwakalisa izikhalo zabo okubalwa kuzo – ukungaphatheki kahle,ukwentuleka kwamathuba emisebenzi,inkohlakalo kanye nokusweleka kwe-Service Delivery.
Imashi iqale ngaseBMW kumgwaqo omkhulu edolobheni laseNewcastle uAllen Street yafike yama phambi kukamasipala waseNewcastle, lapho uKhoza ebehambisana nabaholi beqembu le-EFF eMajuba ,okubalwa uMnu Sibusiso Sizani,ongusihlalo weEFF eMajuba kanye namalunga eqembu,bezodlulisa khona uhlu lwezikhalazo kuMasipala waseNewcastle.
uKhoza uqhube wathi kunezindawo ezinga phansi kwalo Masipala ezinganawo amanzi,udoti ongaqoqwa ngendlela efanele,ukuqashwa ngendlela engenabo ubulungiswa ngaphakathi kwamasipala kanye nenkohlakalo ehlasele uma kukhishwa uhlelo lwamathenda.
Imizamo yokuxhumana noMasipala kanye nokunikezela kwe – Memorandum akuphumelelanga.uKhoza uthe bazokwakha isu lokuthi uMasipala uyithole i- Memorandum yezikhalazo zokungenzi kahle kwawo lomasipala.
Uqhube wathi bengaba khokhi bentela (Tax) akufanele uma bezo zwakalisa izikhalo zabo bese benganakwa,ngoba kusuke kwaziba ukuba bayeza.
Uphethe ngokuthi beyiqembu le-EFF baku lungele ukuya okhethweni futhi bazo qinisekisa ukuthi badla umhlanganiso,balwele unombolo-1 weSifundazwe saKwa-Zulu Natal nakuZwelonke.
Uthe bazoguqula isimo senhlalo saseNingizimu Afrika kanti nezidingo zabantu bazoziletha.Abakholelwa ekukhishweni kwamathenda kodwa bafuna abantu baqashwe nguHulumeni ukuze wonke umuntu ezothola umsebenzi.
Ahaholi be-EFF kanye namalunga eqembu abeyingxenye yemashi
uSihlalo we-EFF kwisifundazwe saKwa-Zulu Natal uMnu Vusi Khoza
Sizani,ongusihlalo weEFF eMajuba
Amalunga e-EFF ngaphandle kwesakhiwo soMasipala waseNewcastle
Forensic team are still investigating the cause of the church collapse